विकास र समृद्धिमा कसैसँग सम्झौता हुँदैन— ज्ञानेन्द्रबहादर कार्की,अर्थमन्त्री – Maitri News
विकास र समृद्धिमा कसैसँग सम्झौता हुँदैन— ज्ञानेन्द्रबहादर कार्की,अर्थमन्त्री
maitrinews June 12, 2017
मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी राजनीतिक ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्राप्त गर्नुभएको छ । पटक पटक अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेका काँग्रेसभित्रकै हस्तीहरुलाई पाखा लगाउँदै कार्कीले अर्थमन्त्रालयको पदभार ग्रहण गर्न सफल हुनुभयो । पदभार ग्रहणपश्चात अर्थमन्त्री कार्कीले आफूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मकरुपमा अगाडि बढाउन भरपुर पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । यसकालागि सम्वद्ध क्षेत्रका विज्ञहरुको रायसुझाव समेत लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता उहाँको छ ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलको गठबन्धन सरकारमा राज्यको ढुकुटी चलाउने जिम्मा उहाँले पाउनुभएको छ । यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नसके उहाँको राजनीतिक उचाई समेत थप बढ्ने छ भने अर्थ मन्त्रालयभित्रका चुनौतीलाई चिर्न नसकेमा मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने अवथा समेत आउन सक्नेछ । सामान्यतया अर्थशास्त्र अध्ययन गरेका मात्रै अर्थमन्त्रीमा हुने परम्परा रहेको भए पनि विगत देखि नै त्यो तोडिएको छ । नयाँ शक्तिका डा. बाबुराम भट्टराई र नेकपा एमालेका सुरेन्द्र पाण्डेले पाएको सफलतालाई अन्यले निरन्तरता दिन सकेका छैनन् कार्कीले लिने नीतिमा अब उहाँको सफलता वा असफलता निर्भर गर्दछ ।
राजनीतिकशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका कार्की राजनीतिक क्षेत्रका इमन्दार नेताकारुपमा चिनिनुहुन्छ । यसअघि जलस्रोत मन्त्रीका रुपमा काम गरिसकेका कार्कीलाई अर्थमन्त्रालय नितान्त नयाँ परीक्षण हो । आर्थिक क्षेत्रमा हुर्कँदै गरेका सकारात्मक परिवर्तनहरुकासाथमा त्यसैभित्र मौलाउँदै आइरहेका विकृतिहरुलाई चिर्नसक्नुपर्ने टड्कारो खाँचो छ । कर्मचारी प्रशासनको सही ब्यवथपनवाट यो स.भव हुने हुनाले यसमा उहाँले खेल्ने भूमिकाले उहाँको सफलता या असफलताको मार्गचित्र कोर्ने छ ।
अहिले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनहरु आइरहेको भए पनि कर ता राजस्वको क्षेत्रमा धेरै समस्या र चुनौतीहरु कायम रहेकोले त्यसलाई चिर्न सकेमात्र उहाँले सफलता प्राप्तगर्ने अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेप :
सिङगो मलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्वगर्ने मौका पाउनु भएको छ । कसरी अगाडि बढ्ने योजनामा हुनुहुन्छ ?
अर्थमन्त्रालय आफैंम महत्वपुर्ण छ । यसको नेतृत्व सम्हाल्नु त्यति हसज पक्कै पनि छैन तर सुझवुझपूर्ण तरिकाले कामगर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मजवुत वनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कल्याणकारी राज्यको मार्गमा अगाडि बढाउने उद्देश्य लिएको छु । नेपालको विकास र समृद्धिका लागि कसैसँग सम्झौता हुँदैन । जनताले महसुस गर्नेगरी नेपाललाई विकासको पथमा लैजान र बजेटले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न दिनरात खटेर काम गर्नेछु । इतिहासमा सबैले स्मरण गर्नेगरी काम गरेर देखाउँछु ।
आर्थिक क्षेत्रभन्दा वाहिरवाट आउनुभयो । लक्ष्य अनुसार कामगर्न सक्छुभन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
मनमा दृढ इच्छाशक्ति भएपछि कामगर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । निश्चित योजना र प्रट आधार सहित कामगर्दा सफलता नमिल्ने भन्ने हुँदैन । मुलुकका निजी क्षेत्रमा उद्यमी व्यवसायी लगायतका सवैलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नेछु ।
के छ त्यस्तो आधार ?
विगतमा पनि आफूले सम्हालेको काम निर्विवाद रुपम जिम्मेवारीपूर्ण तरिकारले सम्पन्न गरिसकेको हो । अहिलेपनि मन्त्रालय नयाँ भएपनि कामगर्ने तरिका आफूमा भरपर्ने कुरा हो । अनुभवी तथा अर्थशास्त्रका ज्ञातामात्रै अर्थमन्त्री हुनुपनर्छ भन्ने छैन । यसअघिपनि अन्य क्षेत्रमा व्यीक्तले राम्रैसँग काम गरेको देखिइसकेको छ ।
आँट गरेपछि जस्तोसुकै अप्ठ्यारो काम पनि गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँको मान्यता हो ?
कामगर्दा इमान्दारितापुर्वक दृढ इच्चाशक्तिकासाथ गर्नु पर्दछ । मैले जलस्रोत मन्त्री हुँदापनि त्यसै अनुसार कामगर्दा सफलता प्राप्त गरेको हो । त्यसैले काममा पूर्ण इमानदारिताका साथ विकास र समृद्धिको चुनौति पार गर्न आफूले सक्दो पहल गर्ने छु । जनताले महसुस गर्ने खालको आर्थिक समृद्धि र संविधान कार्यान्वयनमा सरकार र मेरो पनि मुख्य ध्यान जाने छ ।
यहाँका प्राथमिकता के हुन्छन् ?
आर्थिक समृद्धि तथा त्यसकलागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उपलब्ध स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग आफ्नो प्राथमिकताका विषय हुनेछ । यस्तै संविधानको कार्यान्वयन अर्को प्राथमिकता हो । यस बाहेक आर्थिक समृद्धिकालागि हरतरहले पहल गर्ने छु । दूरदराजका जनताले अनुभूत गर्ने काम गर्ने भन्दै मुलुकमा भर्खरै लागू भएको संघीयता कार्यान्वयन गर्नु यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । मैले त्यसलैलाई आधार वनाए अगाडि बढ्ने हो । यसवाहेक पुँजीगत खर्च बढाउने, ब्यापारघाटा कमगर्ने, वित्तिय अनुशासन कायमगर्दै उच्च आथिृक वृद्धिको वातवारण तयार गर्ने र बजेटले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयना ध्यान दिने लगायतका प्राथकिता छन् ।
बजेट आइसक्यो । त्यसलैलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?
यसअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटलाई नै अगाडि बढाउने हो । बजेटमा समावेस भएका कायृक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा हाम्रो ध्यान जान्छ । पछिल्लो समयमा लामो अन्तरालपश्चात देश सकारात्मक रूपमा आर्थिक वृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको छ । यसलाई नरन्तरता दिन सक्नुपर्दछ । यो जिम्मा मेरो काँधमा आएको छ । नयाँ बजेट आइसकेको छ । हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । यसको कार्यान्वयनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको विधेयक संसदमा छन् । तीनलाई अगाडि बढाउँछौं । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यी सलैलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन हामी आवश्यक छलफलगरी अगाडि बढ्ने छौं ।
Previous Previous post: तराई मधेसमा एमाले बढारिन्छ भन्नेहरु आफै बढारिन्छन् : ओली
Next Next post: लाठी, भाला देखाएर केही हुँदैन, मधेसमा चुनाव कसैले रोक्न सक्दैन